Khabiirka Sky Sports Ee Guillem Balague Oo Ka War Bixiyay Xaalada Alexis Sanchez Ee Kooxaha Ree Manchester Iyo Xogta Oo Arintan Ka Bixiyay. - Laacib.net
Khabiirka Sky Sports Ee Guillem Balague Oo Ka War Bixiyay Xaalada Alexis Sanchez Ee Kooxaha Ree Manchester Iyo Xogta Oo Arintan Ka Bixiyay.
Khabiirka Sky Sports ee Guillem Balague oo todobaad kasta hal mar si toos ah jamaahiirta kubbada cagta ugaga jawaaba su’aalaha ay shabakada Sky Sports iyo bartiisa twitterka ku soo waydiiyaan ayaa wax laga waydiiyay xogta uu ka hayo heshiiska ay Manchester City iyo Manchester United ku doonayaan saxiixa xidiga kooxda Arsenal ee Alexi Sanchez.
Guillem Balague oo si wayn loogu xushmeeyo in uu si gaar ah uga faaloodo kubbada cagta Spain ayaa sidoo kale xog badan ka haya kubbada cagta yurub isaga oo waliba uga hadla si aan buunin lahayn oo inta badan xiiqda ku salaysan taas oo keentay in su’aalo tiro badan usbuuc kasta uu kaga jawaabo Sky Sports.
Guillem Balague oo ka jawaabaya dagaalka kooxaha ree Manchester ee heshiiska Alexis Sanchez ayaa xusay in xidiga ree Chile ay isaga ku xidhan tahay kooxda uu ku biirayaa wuxuuna cadeeyay in Manchester City ay kalsooni buuxda ku qabto in Sanchez ay heli doonto bishan ama suuqa xagaaga oo ay si xor ah kula wareegi karto.
Guillem Balague oo Sanchez ka hadlaya ayaa yidhi: “Sanchez waa in uu isagu doorasho sameeyaa. Man City waxay ku kalsoon tahay in ay ciyaartoyga heli doonaan hadda ama xagaaga. Taasi waa sababta ay hadda ugu dalbanayaan 20 milyan Pound oo kaliya, haddii kale waxay xagaaga kisku dayi doonaan in ay isaga helaan”.
Guillem Balague oo Man City iyo Sanchez ka sii hadlaya ayaa yidhi: “Iyagu ma doonayaan in ay wax ka badan ku kharash gareeyaan laakiin dabcan taasi waxay Arsenal dhigaysaa boos ay muhiimada kala siiyaan. Waxaa suurtogal ah in ay dalabkooda sare u qaadi karaan laakiin waxa ay hadda sheegayaan waa 20 milyan oo Pound ama xagaaga. Taasi waa waxa ay isku dayi doonaan in ay sameeyaan waxayna hubaan in Man United ay xidhiidh la samaysay”.
Intaa kadib Guillem Balague ayaa ka hadlay xiisaha Man United ee Sanchez wuxuuna yidhi: “United heerkan xidhiidh kulamay samayn Arsenal. Isaga ayay xiisaynayaan laakiin wali xidhiidh labada kooxood ahi ma jiro. Sidoo kale Arsenal ma aqbali doonto 20 milyan Pound iyo haddii aanu dalab ka wayni iman waxay door bidayaan in ay ilaa dhamaadka xili ciyaareedka sii haystaan Alexis”.
Guillem Balague ayaa hadalkiisa ku soo xidhay: “United waxay doonaysaa in ay ku dalbato in ka badan 20 milyan Pound iyo mushaar ka badan inta City, sidaa daraadeed, hadda waxa uu haystaa in uu kala doorto-Pep ama lacagta?”.